पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज आउदैन त अब ? स्थानियले भने – बरु गोली हान तर जग्गा दिदैनौँ ! किन यस्तो गर्दैछन् स्थानिय ? - Enepalese.com
पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज आउदैन त अब ? स्थानियले भने – बरु गोली हान तर जग्गा दिदैनौँ ! किन यस्तो गर्दैछन् स्थानिय ?
इनेप्लिज २०७६ मंसिर २७ गते ०:३८ मा प्रकाशित
पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजनाका कारण आफ्नो उठिबास हुने भन्दै पिडित पक्षले गुनासो गरेका छन् ।